Mari Realisasikan Harapan Rakyat Ini: Harga Minyak Turun7Mei 2013
NLD U Win Htein, Daw Suu and Meikhtila Muslims
Government Affiliated Terrorists changing their uniforms after genocide
TG Nik Aziz: DAP Tidak Takut Kepada Islam, Yang Takut Islam Ialah UMNO
It is out in the open - What Ibrahim Ali stands for is what UMNO stands for.
Pissing on the Christians, elections on Sunday to accomodate foreigners, as their off days are on that day!!
Ada Pihak Tebuk Atap Rumah Aishah Untuk Pasang CCTV
Myanmar Military Government’s Human Rights and Democracy
President U Thein Sein and Sr. General Min Aung Hlaing would be held responsible for defaming me by their staff
Turkish foreign minister warns Myanmar violence risks regional escalation
မြန်မာ စစ်တပ်ဟာ ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသမီး တွေကို လိင်ကျေးကျွန် အဖြစ် အဓမ္မ စေခိုင်း နေ
[VIDEO] Malaysia Juara Dunia Dalam Rasuah!
Posted: 15 Apr 2013 11:08 AM PDT
7 Mei 2013 bakal menjadi hari bersejarah buat Malaysia apabila harga minyak yang beberapa kali dinaikkan BN sejak 2008 akan diturunkan Pakatan Rakyat jika berjaya membentuk Kerajaan Persekutuan selepas menang Pilihan Raya Umum ke-13 (PRU 13).
Harapan ini yang ditunggu-tunggu seluruh rakyat akan dilaksana 21 hari lagi menjelang tarikh itu.
"Kamu (Umno BN) katalah apa-apa pun, kita bagi penjelasan.5Mei pilihan raya,6Mei (Pakatan) angkat sumpah. InsyaAllah7Mei, harga minyak di seluruh negara turun," kata Datuk Seri Anwar Ibrahim disambut sorakan gemuruh hampir 7,000 rakyat.
Beliau berkata demikian pada ceramah Jelajah Pakatan Harapan Rakyat di Kuala Pilah, Negeri Sembilan Sabtu lalu.
Penurunan harga minyak antara agenda utama Pakatan Rakyat menuju Putrajaya, yang dimasukkan di dalam Buku Jingga dan Manifesto Pakatan Rakyat.
Ketua Umum KEADILAN itu juga konsisten menyatakan komitmen tersebut pada setiap siri ceramahnya.
Katanya, penurunan harga minyak tidak mustahil untuk dilaksana, memandangkan kedudukan Malaysia selaku pengeluar minyak.
"Ini fakta, sebab itu (Perdana Menteri) Datuk Najib (Razak) tak mahu debat. Dia syarah di TV3 bukan main garang, marah saya.
"Tapi (dengan) saya, (dia) tak boleh jawab. Dia (hanya) marah seorang diri. Sebagai pemimpin, (sepatutnya) kamu kena pertahankan hujah kamu," kata Anwar.
Posted: 15 Apr 2013 06:55 AM PDT
Exhausted, the hooker turns to him and says, "Hey, I was expecting something perverted and disgusting. But that was good.
AND THAT, MY FRIENDLY FELLOW TAXPAYERS, IS EXACTLY HOW THE ILLEGAL IMMIGRANTS ARE SCREWING YOU !
Thanks to Angela who sent me this joke.
Posted: 15 Apr 2013 06:43 AM PDT
Schooling in Burma, with all its mindless emphasis on test scores, class ranks, exam marks and 'outstandingness', has absolutely no organic correspondence with intellectual, personal or moral development of the human young there.
( I suppose that's generally the Asian middle class disease — academic excellence with no serious thoughts. My teenage daughter in Berkeley, properly educated, can holdaserious intellectual conversation with my world renown academic mentor at Wisconsin. She showed absolutely no signs of being intimidated by him and his academic wife. In fact, she even enjoyed sharing her grounded reflections on what's wrong with American middle schools!)
Most of them are brain- and heart-dead or damaged by the way they have been 'educated' within the Burmese state school systems.
Dr. Zani,aMandalayan Myanmar Buddhist, is my schoolmate studied in our school St. Peter's High School (9 BEHS). He holdsaMA from the University of California at Davis andaPhD from the University of Wisconsin, Visiting Fellow of LSE University (London School of Economics) and Senior Fellow at University Malaya.
Posted: 15 Apr 2013 06:28 AM PDT
The world is going gangbusters, printing money to drive the economies and growth. Yet despite the bailouts in the eurozone and easy monetary policy in Europe, Asia, and the U.S., there'sasenseafinancial crisis could surface down the road. China is facingapotential real estate crash that could implode, given the speculative buying and the rise in property values. The reality is that the world—not just America—is extremely busy printing money, especially due to record-low interest rates. The easy money isapretty good short-term strategy, and it's much needed—but whatapotentially explosive national debt!
And there's no guarantee all of this easy money will save the eurozone fromadeeper recession. In America, the easy money has amounted toamassive national debt that will need to be increased and bankruptcy in many municipalities.
Japan just announced an extremely aggressive monetary policy last Thursday that could see the Bank of Japan pump up its money printing presses and double its government bond holdings within two years. (Source: Ranasinghe, D., "Bank of Japan Unveils Aggressive Monetary Policy," CNBC, April 4, 2013.)
Japan isagreat example of how low interest rates have done very little to help the economy. I'm not saying the United States is inasimilar situation, but there's an eerie resemblance.
I remain negative on Japan. The country's gross domestic product (GDP) growth wasasurprise 0.2% in the fourth quarter, following an initial estimate that called foracontraction of 0.4%, according to the country's Cabinet Office. The result lifted the Japanese market and drove optimism toward the possibility of the country getting out of its long coma. While this could happen, it hasn't in the past.
Japan could escape from its economic dormancy, but it's going to take plenty of money andamassive build up of national debt to achieve that goal. Just like in America, Japan will create an even worse national debt situation in order to save the day. The problem is that down the road, the offloading of the national debt and its associated issues will impact the country.
Maung Zarni shared Carlos Sardiña Galache's status.
These two two paragraphs didn't appear in my report published yesterday in The Bangkok Post (I believe it was justamistake oramisunderstanding between the editor and me, but I'm trying to find out why):
"Many Muslim interviewed by Spectrum in Yangon and other places feel that Aung San Suu Kyi has also abandoned them, and expressed their disappointment with her inability to makeaforceful defense of Myanmar's Muslim communities. One of the aspects of the crisis that has puzzled many international observers has been the conspicuous silence of "the Lady" and her party on the issue.
When we mentioned this to Win Htein, he answered that the party is willing "to accept the blame for not taking the necessary steps on behalf of the Muslims," and added that they will "repair the damage later, involving in religious ceremonies and gettingafew committees to get together, but it will beahard task." He said that he had told Aung San Suu Kyi not to go to Meiktila: "I advised her not to come here, because people were blaming me when I supported the Muslims." He admitted that this decision was the result of political calculation, but added: "She wouldn't be able to giveareasonable answer to the conflict, that's why I told her not to come.""
Posted: 15 Apr 2013 06:05 AM PDT
Aung Tin shared Lagoon Eain's photo.
ပြီးရင် အကြမ်းဖက်သူတွေကို ချက်ချင်းပြန်လွှတ်။ အကြမ်းဖက်ခံရသူတွေကို အမြန်ထောင်ချ။
For Wira Thu, even no need to change the Saffron-Thornodethoe-uniform. (The Hunter Thornodethoe wore to kill Elephant King Saddan mentioned in TEN Zattaka.)
Posted: 15 Apr 2013 07:47 AM PDT
Penerimaan bukan Islam khususnya kaum Cina mengenai dasar Islam yang dibawa PAS sehingga mereka tidak lagi berasa takut merupakan satu perkembangan baik untuk lanskap politik Malaysia.
Perkara ini menunjukkan dakwah 'Islam Untuk Semua' dibawa PAS sebagai agama daripada Allah SWT hanya menggerunkan Umno sahaja tetapi diterima baik masyarakat seperti yang berlaku di Kelantan.
"Alhamdulillah kerana Islam adalah agama untuk semua, bukan untuk orang Arab sahaja, sekarang Cina mula tidak takut kepada Islam. Islamphobia tidak ada.
"DAP dalam seminggu lepas sekiranya parti DAP diharamkan ROS, DAP nak bertanding guna lambang bulan (PAS).
"DAP sudah tidak takut kepada Islam sebaliknya Umno yang takut kepada Islam," katanya.
Mengulas lanjut ketika sesi soal jawab 'Bicara Cinta' katanya, kumpulan Sami Buddha di Tumpat, Kelantan memberikan contoh yang baik berbanding Umno apabila memberikan sumbangan sebanyak RM70,000 kepada kerajaan negeri untuk projek pembinaan Lebuhraya Rakyat Kota Bharu-Kuala Krai.
"Waktu Datuk Husam iklan nak buat lebuh raya, sami (Buddha) Tumpat jemput saya dan beri hadiah.
"Hampir RM70,000 sami Buddha derma kepada Kerajaan Kelantan. Dia yakin dengan Islam yang PAS bawa.
"Umno Kelantan buat apa? Dia bawa kereta sorong buruk. Otak umno mempersenda Kerajaan Kelantan buat lebuhraya," jelasnya lagi.
Di samping itu katanya, dalam usaha menawan pengundi Kelantan, Umno-BN ingin menampilkan calon berstatus 'ulama' sedangkan dasar perjuangan mereka menumpukan kepada politik kebangsaan.
Tegasnya, sekiranya Umno-BN ingin 'meniru' dasar PAS yang mengetengahkan tokoh agama untuk dijadikan pemimpin, mereka seharusnya mengambil kira semua aspek dan bukannya memilih perkara tertentu sahaja.
"Umno Kelantan buat kenyataan dalam seminggu dua ini nak memlih calon ulama. Dia kebangsaan, pilih ulama. Dah kenapa tidak pilih kebangsaan?
"Nak tiru dengan sebab orang Kelantan suka ulama, pilih ulama. Mana ada ulama dalam kebangsaan. Ulama ertinya orang yang mahir dengan agama Allah," tambah Nik Aziz lagi.
Bertempat di Auditorium Kumpulan Media Karangkraf, Menteri Besar Kelantan Nik Abdul Aziz turut melancarkan buku terbarunya bertajuk 'Bicara Ini Demi Ilahi' terbitan Grup Buku Karangkraf. -SH
Posted: 15 Apr 2013 04:46 AM PDT
In his speech at the emergency OIC Contact Group meeting on Rohingya Muslim minority, Ihsanoglu reiterated that the violence against Muslims in Myanmar was unacceptable and should not continue. "Such violence isaclear indication of the government's negative approach in dealing with ethnic and religious tensions that erupted last summer," he said.Ihsanoglu called on member states of the Contact Group to take action through communication with the international community to implement recommendations of the OIC Islamic Summit held in Makkah. He also suggested requesting OIC member states which are members in the Contact Group and which have diplomatic missions in Myanmar to use their good offices to put this issue forward, expressing readiness of the OIC to continue coordination and render necessary support to improve the conditions of Muslims in Myanmar until they regain all their legitimate rights.
"Despite our attempts to establish communication with the authorities in Myanmar by selectingaprominent figure fromaneighboring country to visit Myanmar and open discussions with officials, the government was not responsive," Ihsanogle said.
"This is no longeraRohingya issue, it's becoming an Islamic issue because the radical elements in Myanmar are trying to eliminate Islam from the country," he said.
Malaysia is also trying to give the Rohingyasabetter status as also Pakistan, which has more than 400, 000 refugees. "We have some challenges in Banagladesh and we are working with Indonesia. In Thailand some of them are in the camps but we are trying to work it through," he added. "The most important thing we are trying to reach is basically end the violence.
Myanmar government is very clever in maneuvering. So every time pressure is put on them, they try to say positive things and ease the pressure and things go back to being violent," Uddin said.
Posted: 15 Apr 2013 04:13 AM PDT
Q – မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ်က ဘာသာရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကို ခေါ်ယူ တွေ့ဆုံခဲ့တယ်။ အဲဒီ တွေ့ဆုံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ထွက်ပေါ်လာတဲ့ သတင်းတွေကြားသိရပါတယ်။ ဒါကြောင့် အဲဒီ တွေ့ဆုံမှုအကြောင်းကို ဦးသိန်းဝင်းအောင်အနေနဲ့ ပြောပြပေးလို့ ရမလားခင်ဗျာ။
A – ပြောပြလို့ရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၂-ရက်နေ့ သောကြာနေ့ နေ့လည် ၁၂-နာရီလောက်မှာ အိုလမာအဖွဲ့ရုံးကနေ ကျွန်တော့်ကို ဖုန်းဆက်လာပါတယ်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ၀န်ကြီးချုပ် ဦးရဲမြင့်က ဘာသာရေးအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကို နေ့လည် ၃-နာရီမှာ တွေ့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ပြောလာပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့လည်း တွေ့ချင်နေတဲ့အချိန်ဆိုတော့ ကောင်းတယ် တွေ့လိုက်ကြမယ်ဆိုပြီး တွေ့ဖို့ ပြင်ဆင်လိုက်ကြတယ်။ အဲဒီနေ့က သောကြာနေ့လည်းဖြစ်တော့ ကျွန်တော်လည်း နေ့လည်ဝတ်ပြုပြီး အိုလမာ ရုံးခန်းကို ရောက်သွားတယ်။ ၀န်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ရင် ပြောသင့်တာလေးတွေကို တိုင်ပင်လိုက်ကြတယ်။ ပြီးတော့ ဘာသာရေး အဖွဲ့ကြီးတွေရယ် ကျွန်တော်တို့ တွရီကာရယ်က အားလုံးစုစုပေါင်း (၁၀)ယောက် သွားတွေ့ကြပါတယ်။
Q – ဟုတ်ကဲ့။ ၀န်ကြီးချုပ်က ဘယ်အကြောင်းအရာအတွက် ခေါ်ယူတာပါလဲ။
A – ခေါ်ယူတဲ့ ခေါင်းစဉ်က မရှိပါဘူး။ ဒီအတိုင်း နှုတ်မိန့်နဲ့ တွေ့ဖို့ခေါ်တာပါ။ တွေ့ဆုံမှုကို တခြား ဌာနဆိုင်ရာ အရာရှိတွေလည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။
Q – ဘယ်နေရာမှာ ခေါ်ယူတွေ့ဆုံတာပါလဲ။
A – မန္တလေးတိုင်း ၀န်ကြီးချုပ်ရုံး အစည်းအဝေးခန်းမမှာ ခေါ်ယူတွေ့ဆုံတာပါ။ ၁၂-ရက်နေ့ နေ့လည် ၃-နာရီမှာ ဆုံတာပါ။
Q – ဟုတ်ကဲ့ပါ။ ဒါဆို တွေ့ဆုံတဲ့အချိန်မှာ ဘာတွေကို ပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ပါသလဲ။
A – စစတွေ့တွေ့ချင်းပဲ ၀န်ကြီးချုပ်က တစ်ခြားဘာမှ မပြောပဲ အခု မိတ္ထီလာ ကိစ္စဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး စပြောတယ်။ မိတ္ထီလာကိစ္စက မွတ်စလင်မ်တွေဘက်က စပြီး ဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ ရွှေဆိုင်ပြဿနာကအစပြုခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ ဘုန်းကြီးကို သတ်တယ်။ နောက်ပြီးတော့ ကျောင်းဝင်းထဲကနေ ကလေးတွေက အော်ကြတယ် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေရဲ့ သွေးနဲ့ဆေးမယ်လို့ အော်ကြလို့ ပြဿနာတွေ ပိုမိုကြီးထွားကုန်တယ်။ မွတ်စလင်မ်တွေဟာ အစွန်းရောက်နေကြကြောင်း၊ အသေခံဗုံးခွဲတယ်၊ မွတ်စလင်မ်တွေက မဟုတ်မမှန်သတင်းတွေ ပြောဆိုကြတယ် ဆိုတာတွေပြောတယ်။ ပြီးတော့ သူပြောပုံတွေက ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ သံဃာတော်တွေကို မွတ်စလင်မ်တွေက အပြစ်မြင်နေတာတွေကို ရပ်တန့်စေဖို့ မွတ်စလင်မ်တွေကို အပြစ်ပုံချပြီး ပြောတယ်။ နောက် အခု မိတ္ထီလာဖြစ်ရပ်အတွက် စားနပ်ရိက္ခာအတွက် ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေကို ၀န်ကြီးချုပ်က အားလုံးစီစဉ်ပေးထားတယ် ဆိုတာကို ပြောတယ်။ မိတ္ထီလာကိစ္စအတွက် ၀န်ကြီးချုပ်အနေနဲ့ ကူညီမှုတွေ စီစဉ်ပေးတာ အခုအချိန်ထိ မရှိပါဘူး။ အဲဒါကို ၀န်ကြီးချူပ်က သူစီစဉ်ပေးထားတယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ထင်ထားတာက အခုဖြစ်ပွားသွားတဲ့ မိတ္ထီလာကိစ္စအတွက် စေ့စပ်ညှိနှိုင်းမှုတွေ၊ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရေးအတွက် ဘာတွေ လုပ်ဆောင်ကြမလဲဆိုတာ ခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြောဆိုမယ်လို့ ထင်ထားခဲ့ကြတာပါ။ ၀န်ကြီးချုပ်က အဲဒါတွေ မပြောပဲ မွတ်စလင်မ်တွေဘက်ကို ဖိပြီး ပြောလိုက်တော့ တော်တော်လေး အံ့သြသွားတယ်။
Q – ၀န်ကြီးချုပ်က အခုလို ပြောလိုမှုအပေါ် အဖွဲ့ကြီးက ခေါင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ ဘာတွေများ ပြန်ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသလဲ။
A – ၀န်ကြီးချုပ်က အဲလိုပြောလိုက်တော့ ကျွန်တော်လည်း ၀န်ကြီးချုပ်ကို ရှင်းပြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ မွတ်စလင်မ်တွေဟာ အစွန်းရောက်တွေ မဟုတ်ဘူးဆိုတာရယ်၊ ကျောင်းဝင်းထဲက ကလေးတွေအော်တာဟာလည်း ဘုရားသခင် နာမကို တသပြီး ကြောက်ရွံ့အော်ဟစ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာရယ်၊ မွတ်စလင်မ်တွေအနေနဲ့ ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ရေးအတွက်လည်း အထူးကြိုးပမ်း ဆောင်ရွက်နေတယ်။ သံဃာတော်တွေကို အပြစ်မြင်နေတယ်ဆိုတာလည်း မဟုတ်ကြောင်း၊ မန္တလေးမှာ ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ရေး အခမ်းအနားလုပ်တော့ သံဃာတော်တွေအတွက် သင်္ကန်းတွေကို ကျွန်တော်တို့ငွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ၀ယ်ယူလှူဒါန်းပါတယ်။ မော်လ၀ီတွေအတွက် ပုဆိုးလှူပါတယ်။ ဒါမျိုးတွေ လုပ်ခဲ့ကြတာပါ။ အကြမ်းဖက်မှုကို မြန်မာနိုင်ငံက မွတ်စလင်မ်တွေလုပ်မှာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ပြောတယ်။ ပြီးတော့ အခုဆို ယှအ်ဗာန်လ ရမသွာန်လ(ဥပုသ်လ)ကို ရောက်တော့မယ်။
ဒါကြောင့် မွတ်စလင်မ်တွေအတွက် ဗလီတွေ အမြန်ဆုံး ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း အဲဒါတွေကို ပြောပြတယ်။ အဲဒီမှာ ၀န်ကြီးချုပ်က ကျွန်တော့်ကို ငေါက်ငမ်းပါတယ်။ ခင်ဗျားကို ပြောနေတာမဟုတ်ဘူး။ ခင်ဗျားနဲ့ ဆွေးနွေးနေတာမဟုတ်ဘူး။ ခင်ဗျားကို ထပ်ပြောခွင့် မပေးနိုင်ဘူးလို့ ပြောတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်လည်း ပြောသင့်တာကို ထပ်ပြောပြပါတယ်။
Q – ဒီတော့ ၀န်ကြီးချုပ်က ဘာပြောပါသလဲ။
A – ၀န်ကြီးချုပ်က ကျွန်တော့်ကို ခင်ဗျားတို့ဘာကို ရည်ရွယ်နေတယ်ဆိုတာသိတယ်။ ခင်ဗျားဆက်ပြောရင် ဘယ်ရောက်မယ်ဆိုတာ သိတယ်။ အခု ခင်ဗျားပြောနေတာ တစ်ခုခုဖြစ်လာရင် ခင်ဗျားတရားခံပဲ။ ဖြစ်လာတာနဲ့ ခင်ဗျားကို အရင်ဖမ်းချုပ်မယ် ဆိုပြီး ကြိမ်းဝါးတယ်။
Q – ဟုတ်ကဲ့။ ဒါဆိုရင် အဲဒီ တွေ့ဆုံမှုရဲ့ နောက်ဆုံး အချုပ်က ဘယ်လို အဆုံးသတ်ခဲ့ပါသလဲ။
A – နောက်တော့ သူဆက်ပြောတယ် အခု သင်္ကြန်ကာလရောက်တော့မှာ သင်္ကြန်ကာလမှာ အက်ဆစ်နဲ့ပက်မယ်၊ ဘာဖြစ်မယ် ညာဖြစ်မယ် အဲလိုတွေ သတင်းထွက်နေတယ်။ အဲဒါတွေကို မွတ်စလင်မ်တွေက ထိန်းပေးဖို့ ပြောတယ်။ နောက်ဆုံး အချုပ်ကတော့ အဲဒါပါပဲ။
Q – ၀န်ကြီးချုပ်က အခုလို ခေါ်ယူတွေ့ဆုံပြီး ပြောဆိုကြိမ်းမောင်းခဲ့တာတွေ၊ မျှတမှုမရှိပဲ ဘက်လိုက်ပြီး တဘက်သတ်ပြောခဲ့တာတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သမ္မတကို စာတင်မယ်လို့ သိရတယ်။ အဲဒါကရော ဘယ်လိုများ လုပ်ဆောင်နေပါသလဲ။
A – ၀န်ကြီးချုပ်ရဲ့ အခုခေါ်ယူတွေ့ဆုံမှုက သက်သက်မဲ့ ကြိမ်းမောင်းခြိမ်းခြောက်မှု ပုံစံပါပဲ။ ၀န်ကြီးတစ်ဦးအနေနဲ့ မလုပ်သင့်တာကို လုပ်တယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ သမ္မတဆီရော ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဌဆီရော တရားဝင် တိုင်ကြားသွားမှာပါ။ အဖွဲ့ကြီးတွေ အနေနဲ့ အဲဒါကို စီစဉ်နေပါပြီ။
Q – အခုလို ဖြစ်သွားတဲ့ ကိစ္စရပ်အပေါ်မှာ ဦးသိန်းဝင်းအောင် အနေနဲ့ ဘာများ ပြောချင်ပါသေးလဲ။
A – အခုထွက်ပေါ်လာတဲ့ သတင်းတွေက မွတ်စလင်မ်တွေဘက်က ထုတ်တဲ့သတင်းမဟုတ်ပဲ တခြားက သူတို့ဘာသာသူတို့ ကောလဟလ သတင်းထုတ်၊ ပြီးရင် မွတ်စလင်မ်တွေဘက် လှည့်ပြောတာမျိုးကိုတော့ ကျွန်တော်တို့လက်မခံပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ကတော့ အဲဒါအတွက်ဆို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းသာပြော လိုအပ်ရင် ကျွန်တော်တို့ ကိုယ်တိုင် ကင်းစောင့်ပေးရမလား စောင့်မယ်။
၀န်ကြီးချုပ်တစ်ယောက်အနေနဲ့ မပြောသင့်တာတွေကို ပြောတယ်။ မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ ပြီးတော့ မွတ်စလင်မ်တွေ ဗုံးခွဲတယ်ဆိုပြီးပြောတယ်။ မွတ်စလင်မ်တွေ ဗုံးမခွဲပါဘူး။ ဒါပေမယ့် နှလုံးသားတွေကို ခွဲပြပါမယ်။ လာမယ့် ၂၀၁၅-ခု ရွေးကောက်ပွဲကျရင် မြင်တွေ့ရမှာပါ။ ကျွန်တော် အဲဒါပဲ ပြောချင်ပါတယ်။
Q – ဟုတ်ကဲ့ အခုလို ဖြေကြားပေးတာ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
A – ကျွန်တော်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
M-Media မှ ကူးယူဖော်ပြသည်။
Posted: 15 Apr 2013 03:24 AM PDT
Pasir Mas Umno division is prepared to give way to Perkasa president, Ibrahim Ali, to defend his parliamentary seat - if he is prepared to contest under the BN logo. Its division chief Hanafi Mamat said this would be only if there was agreement from the party's top leadership and only if Ibrahim contests under the BN ticket. "Umno Pasir Mas got to know that Ibrahim would like to contest here, but we are uncertain whether he will contest under the BN or as an independent candidate.
"If the party leadership gives Ibrahim the go-ahead to contestaparliamentary seat, then we will accept it. The division will not be angry as the Umno leaders decide what is beneficial for the party," Berita Harian today quotes Hanafi as saying. The Perkasa president and former deputy minister in the Prime Minister's Department was reported as saying earlier this month that he would defend the Pasir Mas seat. Even former prime minister Dr Mahathir Mohamad has declared his support for Ibrahim.
Ibrahim also said he would take temporary leave as Perkasa president to concentrate on defending his seat. Until the general election is over, he added, his deputy Abdul Rahman Bakar would be acting president of Perkasa. Malaysiakini
Posted: 15 Apr 2013 03:23 AM PDT
From Malaysiakini.By Terence Netto : Bishop says Sunday ballotabane to Christians
I guess foreign workers will not be be able to take off onaSaturday to vote, Sunday is an off day for most of them. It is to cater for the foreign workers, voting for UMNO, not for citizens of Malaysia that is why erections oops elections are being held onaSunday. They actually want foreigners to vote them in as the government of the day, is that not obvious?????????.
Catholic Bishop Dr Paul Tan Chee Ing said the government has displayed scant respect for its '1Malaysia' slogan by allowing the Election Commission to hold polling onaSunday. The EC last Wednesday set Saturday, April 20, as nominations day and fixed polling for Sunday, May 5.
"In spite of the fact that the government knows that Sunday isaholy day where Christians must go to church and worship God, the EC has set polling for suchaday," bemoaned the head of the Catholic Church in the Melaka-Johor diocese.
"This disrespect of the government of Christian rights just proves that its '1Malaysia' slogan was merely rhetorical and not intended to be substantive," remarked Paul Tan.
"The vote in the last two general elections was held onaSaturday which is ideal for the discharge of the civic obligation to vote, particularly inacountry that adheres toafive-day work week. "This time the vote has been fixed foraSunday, which would be disruptive to Christians wanting to acquit themselves of their religious and civic obligations on the same day," said the Jesuit-trained prelate.
He described the decision to hold the vote onaSunday as reflective ofapattern of government insensitivity to Christians as seen in the seeming immunity conferred on some politicians who had engaged in stoking unfounded fears of Christian proselytisation of Muslims and others who had even threatened to burn the Bible. "This decision onaSunday ballot capsaseries of actions or their lack which in combination reflects callous insensitivity to the feelings of Christians in Malaysia," opined the bishop. "For this reason, I will urge Catholics in my diocese to consider carefully before voting. "The BN government is demonstrably false in respect of its slogan of '1Malaysia' which we understand to beacall to buildaunited nation. The slogan has been honoured more in the breach than in the observance."
Unable to return to hometowns to vote
Bishop Tan disclosed that in his diocese there are many priests who have to return to their original residence where they are registered as voters. "They are caught inadilemma: to say Mass (the Catholic way of worshiping God and receiving His blessings) or to return to vote. "I, too, am caught in this situation as I am unable to return to Petaling Jaya where I am registered asavoter. This wasn'taproblem in the last two elections when polling was held onaSaturday." The bishop also pointed out that there are Christian workers attached to parishes in his diocese who will similarly find it hard to return to their hometowns to vote.
"What about people living in the interior like the orang asal in Sabah and Sarawak. They too will be caught in suchadilemma," he said. Inarecent census conducted by the Catholic Church, the number of Catholics in Malaysia was said to be 926,000, among an overall Christian population of 2.2 million inacountry that the 2010 national census said had 28 million people. Sunday voting - EC disrespecting Rukunegara
Posted: 15 Apr 2013 05:02 AM PDT
Penyanyi Aishah atau nama penuhnya Wan Aishah Wan Ariffin mendakwa beliau hampir menjadi mangsa perbuatan jahat musuh politik PAS apabila rumahnya ditebuk atapnya untuk dipasang kamera.
M-Media ကာတွန်း- Lagoon Eain
Myanmar Military Government's Human Rights and Democracy
Posted: 15 Apr 2013 12:47 AM PDT
Shameless Bama Cyber-troopers doing character assassinations repeatedly.
I wrote the third warnings on Hmuu Zaw and Ye Htut's FB walls.
"This is the third warning to control your cyber-troopers"
Regarding the same old story by…
1. မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ အမျိုးသားရေး လှုပ်ရှားမှု ကော်မတီ (M.N.M.C),
2. ဘင်္ဂလီကျူးကျော်သူများကို တားဆီးဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေး အဖွဲ့,
3. လူထု မောင်ကာဠု
Note, here is the proof: He wrote>>> ကျွန်တော် တာဝန်တစ်ရပ်နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး စုံစမ်းရင်းနှင့် = Gov servant. Military Intelligence Agent or Special Police Investigator.
စာရေးသူပေးပို့တဲ့ မူရင်းအတိုင်းဖော်ပြထားပါသဖြင့် ရိုဟင်ဂျာနေရာမှာ ဘင်္ဂါလီလို့ ပြင်ဖတ်ပေးပါ။ဒီအကြောင်းသေချာသိသူများ အမှားအမှန်ဝေဖန်ပေးကြပါ။
ကျွန်တော် တာဝန်တစ်ရပ်နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး စုံစမ်းရင်းနှင့် ဒီစာကို ရေးဖို့တွန်းအားဖြစ်စေတာ ယခုလက်ရှိ ဖြစ်လာတဲ့ ဘာသာရေး ပဋိပက္ခများ၊ နိုင်ငံရပ်ခြားမှာ မြန်မာလူမျိုးတွေ အသတ်ခံရခြင်းများ၊ အမေစုနဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ပုံကို မီးရှို့ဝံ့လောက်အောင် သတ္တိကောင်းကောင်းနှင့် ရိုင်းပြနေသူများကြောင့် မရေးမဖြစ်လို့ ရေးလိုက်ရခြင်းပါ။
Dirty low standard lies of Myanmar Governent Cyber-trooper Maung Kar Lu
Ludu Mg Karlu Web site is named in FB as GOVERNMENT WEB SITE. He had wrote and DEFAMED with LIES and FALSE NEWS about my friends U Aung zaw Win, Myit Makha U Min Min Latt, Dr. Maung Zarni, Ye Yit Thitsar, Ko Zaw Min Tun, MMedia, Zay Yar Store, Maungmaung skw (my brother) and me.
Kalau dah namanya PENJILAT HARAM JADAH, UTUSYAITAN DIKENALI.. Macam ni la mereka melaporkan berita. Berita dilaporkan pun berunsur FITNAH. Sampai tuan punya badan sendiri TERKEJUT!!!
Terima kasih pada Dr Maszlee Malik yang menjelaskan tentang penipuan ini.. -fb
Sedap tajuk Utusan Malaysia hari ini, "PRU-13: Lagi ulama tinggalkan Pas, sertai UMNO". Apabila berita tersebut dibaca, persoalannya di minda "ulama mana sertai UMno ni…"
Yang disebut dalam huraian beritanya;
Trend penyokong pembangkang khususnya golongan ulama dan tokoh agama kebelakangan ini menyertai UMNO jelas menunjukkan ada yang tidak kena dengan kepimpinan Pas.
Ketua kumpulan itu, Yusof Mohamed memberitahu, kekecewaan utama yang membawa kepada keputusan mereka menyokong UMNO kerana Pas kini semakin jauh terpesong daripada ajaran Islam. – Utusan Malaysia
Utusan hanya menyebut "Yusof Mohamed", tak pula disebut ustaz ke apa ke di pangkal namanya. Tak nak sebut ke apa atau tak berani sebut?
Utusan tak tahan dengan 'kesedapan' tajuk "Sah Muhammad Taib sertai PAS", "Bekas MB sertai PAS" yang berlegar-legar di media PR. Oleh itu, Utusan pun nakkan tajuk sedap juga… -ekeleh.com
Posted: 14 Apr 2013 10:51 PM PDT
Angkatan Muda KEADILAN Pulau Pinang (AMKPP) sentiasa menghormati dan menghargai kesepakatan dan ukhwah yang telah terjalin di antara KEADILAN – PAS – DAP. Semenjak awal penubuhan PAKATAN, perjanjian yang termeterai melalui Dasar Bersama menjadi dokumen penting untuk masa depan politik bangsa Malaysia. Kerjasama yang terjalin menampakkan hasilnya apabila hari ini regim Barisan Nasional berada di kedudukan paling kritikal dalam sejarah.
Angkatan Muda KEADILAN Pulau Pinang (AMKPP) yakin dengan momentum semangat rakyat Pulau Pinang untuk mengekalkan kepimpinan kerajaan Pakatan Rakyat dalam PRU 13, kita juga yakin PRU 13 ini adalah peluang terbaik kita untuk memenangi beberapa kerusi majoriti Melayu seperti N21 Sungai Acheh dan menenggelamkan UMNO/BN. Namun usaha ini akan terencat jika kita tidak memahami matlamat yang utama iaitu menumbangkan Barisan Nasional.
Angkatan Muda KEADILAN Pulau Pinang (AMKPP) berasa terkilan dengan beberapa siri serangan peribadi yang mula dilancarkan pada Saudara Badrul Hisham Saharin yang diumumkan sebagai calon KEADILAN untuk N21 Sungai Acheh pada9April lalu. Serangan di media sosial sehinggakan pendedahan maklumat peribadi mengenai Saudara Badrul dikhuatiri akan meletakkan diri beliau dan keluarga di dalam ancaman. Sikap seperti ini harus dihentikan.
Angkatan Muda KEADILAN Pulau Pinang (AMKPP) menyeru kepada semua pihak, termasuk kepada Calon PAS, Ustaz Yusni Mat Piah untuk sama – sama turun berkempen di Sungai Acheh bersama Calon KEADILAN, Saudara Badrul Hisham. Langkah yang terbaik adalah untuk menyerahkan keputusan kedudukan kerusi N21 Sungai Acheh kepada Majlis Pimpinan Pakatan untuk ditentukan. Memastikan kemenangan siapa pun calon PAKATAN di Sungai Acheh adalah lebih bermakna daripada kita terus membiarkan regim Barisan Nasional terus berkuasa
Timbalan Ketua Angkatan Muda KEADILAN Pulau Pinang (AMKPP)
Posted: 14 Apr 2013 10:36 PM PDT
Turkish foreign minister warns Myanmar violence risks regional escalation Posted on 2013/04/14
Davutoglu says attacks on ethnic Rohingya Muslims must stop immediately
JEDDAH (AA) – Turkish Foreign Minister Ahmet Davutoglu on Sunday said violent acts targeting Myanmar's ethnic Rohingya Muslims were well planned, adding that the incidents risked wider instability in the region.
"Attacks on Muslims [in Myanmar] are highly planned and coordinated and security forces do not stop the incidents," Davutoglu toldaSaudi Arabia meeting ofaMyanmar contact group comprised of foreign ministers of the Organization of Islamic Cooperation (OIC).
Davutoglu said Myanmar's government must immediately act to fulfill its obligations and move to stop the violent attacks that included torchings, ambushes and deadly assaults in Rakhine state.
"Myanmar's governmet must show that perpetrators of such kind of incidents cannot go unpunished. Hatred between Muslims and Buddhists must be averted," he said.
"More than 100 thousand people had to leave their homes and they still did not return. Moreover they are denied of their rights. Justawhile ago 44 Muslims lost their lives. Over 1,300 houses and many mosques have been burnt down," Davutoglu said.
Davutoglu proposedaseven-point plan which includedafresh OIC initiative,ajoint letter to Myanmar's government by presidents of OIC's member countries that asks Myanmar's government for assurances for the return of Rohingya Muslims to their homes, andavisit by the OIC contact group to Rakhine.
Davutoglu said Turkey was ready to extend any support to OIC.
OIC head urges Security Council to protect Myanmar's Muslims
Ihsanoglu calls for international action to stop violence on ethnic Rohingya
Head of the Organization of Islamic Cooperation on Sunday appealed to the UN Security Council to intervene to protect Myanmar's Rohingya Muslims from ethnic violence.
"Security Council must protect rights and lives of Rohingya Muslims," Ekmeleddin Ihsanoglu toldaforeign ministers' meeting of member countries in Jeddah, Saudi Arabia.
The meeting brings together top diplomats of Turkey, Afghanistan, UAE, Brunei, Djibouti, Indonesia, Malaysia, Egypt, Senegal and Saudi Arabia who will discuss violent attacks including torchings, ambushes and deadly assaults in Rakhine state.
Ihsanoglu also warned againstaregional escalation of tensions
Posted: 14 Apr 2013 09:27 PM PDT
မြန်မာ စစ်တပ်ဟာ ရိုဟင်ဂျာ အမျိုးသမီး တွေကို လိင်ကျေးကျွန် အဖြစ် အဓမ္မ စေခိုင်း နေသလော
(ဓါတ်ပုံ – VICE)
RB News 14.4.2013
မြန်မာ ပြည် နိုင်ငံသား အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် များကတော့ လက်ရှိ အချိန်ထိ အလွန် စိုးရိမ် ထိတ်လန့် စ ရာ ကောင်း တဲ့ အခြေ အနေ တစ်ခု အောက်မှာ ရှိနေ ဆဲပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်က စလို့ မြန်မာ ပြည်ရဲ့ လူများ စု ဖြစ်တဲ့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ၀င်များဟာ နိုင်ငံရဲ့ လူနည်းစု လူမျိုးစု ဖြစ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်ဆလင် များကို တိုင်းရင်း သား မဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ ထင်မြင် ယူဆ ချက်ကို အကြောင်း ခံပြီး ပြင်းပြင်း ထန်ထန် ဆန့်ကျင် တိုက်ခိုက် ခဲ့ပါတယ်။ ဒီတိုက်ခိုက် မှုတွေဟာ ယခု နှစ်ထိ တိုင်အောင် ဆက်လက် ဖြစ်ပွား နေဆဲ ဖြစ်တဲ့ အပြင် ခုဆို ရင် ရက်စက် ကြမ်းကြုတ်တဲ့ ဗုဒ္ဓ ဘာသာ ၀င်များဖြင့် ဖွဲ့စည်း ထားတဲ့ အကြမ်းဖက် ဂိုဏ်းတွေက ရိုဟင် ဂျာ တွေအပြင် ရိုဟင်ဂျာ မဟုတ်တဲ့ တခြား မွတ်ဆလင် များရဲ့ အိုးအိမ် ပစ္စည်း တွေကို လုယက်၊ မီးရှို့ ဖျက်ဆီးခြင်း၊ လူများကို ရက်ရက် စက်စက် သတ်ဖြတ် ခြင်းများ ပြုလုပ် လာပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
မျက်မြင် သက်သေ များရဲ့ ခိုင်လုံ တဲ့အတည် ပြုချက်အရ စစ်တွေ မြို့နဲ့ မိုင်အနည်း ငယ်အကွာ မှာရှိတဲ့ တပ်ရင်း – ၂၇၀ ထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာ အမျိုး သမီး ၂၀ ခန့် နဲ့ ရှစ်နှစ် အောက် ကလေး ၃ ယောက်ကို အဓမ္မ ဖမ်းဆီး ချုပ်နှောင် ထားတယ် လို့ သိခဲ့ ရတယ်။ မျက်မြင် သက်သေ တစ်ဦး ဖြစ်သူ အာမီနာ (နာမည် ရင်းမဟုတ်) ရဲ့ ပြောဆို ချက်အရ သူမ အဲဒီ တပ်စခန်း နားက ဖြတ်သွား တုန်းက သူမကို လှမ်းခေါ် တဲ့ အ သံ ကြားခဲ့ ရတယ်။ ဖမ်းဆီး ခံထား ရတဲ့ အမျိုးသမီး တွေက သူမကို အကူ အညီ တောင်းခဲ့တယ်။ အရင် ဆုံး သူမကို မွတ်ဆလင် အမျိုး သမီး ဟုတ်၊မဟုတ် မေးပါတယ်။ ပြီးတော့ အမျိုး သမီး တစ်ယောက်က "ကျမ တို့ကို ကယ်ပါ။ ကျမ တို့ကို ဒီနေရာက လွတ်မြောက် အောင် ကူညီ ပေးမယ် ဆိုရင် နောင်တမ လွန်မှာ ရှင် ဂျန္နသ် သုခဘုံ ကို ရရှိပါ လိမ့်မယ်" လို့ပြော ပါတယ်။ "ကျမတို့ ဒီစစ်သား တို့ရဲ့ ညှင်းပန်း မှုတွေကြောင့် သေရပါ လိမ့်မယ်။ ကျမတို့ မွတ်ဆလင် အမျိုး သမီးတွေ အဖြစ်ပဲ နေချင် ပါတယ်။ ကျမတို့ ဒီတိုင်းသာ ဆက်နေ ရရင် ကျမတို့ သေရင် ငရဲ ကျမယ့် ဘ၀ပါ။" လို့ ပြောပါ တယ်။ သူမတို့ ပြောတဲ့ ဆိုလို ရင်းက သူမ တို့ကို မြန်မာ စစ်သား တွေက အဓမ္မ မုဒိမ်း ကျင့်ခံ နေရ တယ်လို့ ပြောနေ တာဖြစ်ပြီး၊ ဒီလို အဖြစ် ဆိုးတွေကို တခြား သူတွေ သိသွား အောင်လည်း သူမတို့ ရှင်းရှင်း လင်းလင်း ဖွင့်မပြော ရဲကြ ပါဘူး။ ဒီလို ဖမ်းဆီးခံ ထားရတဲ့ အမျိုး သမီး တွေဟာ သူတို့ကို လွတ်မြောက် အောင်ကယ် တင်နိုင် မဲ့သူ တစ်ဦး ဦးဆီ အကြောင်း ကြားပေးဖို့ အာမီနာကို အကူ အညီ တောင်းခဲ့ ပါတယ်။ သူတို့ဟာ စစ်တွေ မဟုတ်တဲ့ တခြား ဒေသ တွေကနေ ဖမ်းဆီး ခံလာ ရတဲ့ အမျိုး သမီး တွေဖြစ် တာကြောင့် သူတို့ မိဘ တွေလည်း သူမ တို့ကို ပြန်ရှာ တွေ့နိုင် တော့မှာ မဟုတ် ဘူးလို့ လည်း ပြောခဲ့ ပါတယ်။
Posted: 14 Apr 2013 09:03 PM PDT
၁။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က "မြန်မာနိုင်ငံတွင် တိုင်းရင်းသားဖြစ်ခြင်း အဓိပ္ပါယ်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဖွင့်ဆိုရန် လိုအပ်နေသည်"ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
၂။ နှစ်တစ်ထောင်ကျော်သက်တန်းရှိပြီး ၁၉၄၈ခုနှစ်တွင် လွတ်လပ်ရေးရခဲ့သော ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတွင် အစ္စလာမ်သာသနာဝင် တိုင်းရင်းသားများအပါအဝင် တိုင်းရင်းသား (၁၄၄)မျိုးရှိသည်။ ၁၉၆၂ခုနှစ်မှ စတင်သော မဆလ၊ နဝတ၊ နအဖသမိုင်းသည် လိမ်ညာလှည့်ဖျားမှု၊ အာဏာအလွဲသုံးစားမှုများနှင့် ပြည့်လျှမ်းနေသော စစ်အာဏာရှင်သမိုင်းဖြစ်သဖြင့် နှစ်ငါးဆယ် စစ်အာဏာရှင်သမိုင်းကို ဂုဏ်ရောင်ပြောင်၊ အစဉ်အလာကြီးသော နှစ်တစ်ထောင်ကျော် မြန်မာ့သမိုင်းဟု တာဝန်ရှိသော မြန်မာ့နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်များက လွဲမှားစွာ မမှတ်ယူသင့်ချေ။
၃။ နိုင်ငံတော် လုံခြုံရေး၊ အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေးတို့အတွက် အသက်တမျှ အရေးပါသော တိုင်းရင်းသားဖြစ်ခြင်းနှင့် မဖြစ်ခြင်းကို ပြည်သူလူထု၏ သဘောထားမပါဘဲ လက်တစ်ဆုပ်စာ စစ်အာဏာရှင်အုပ်စုက ထင်သလိုသတ်မှတ်ခြင်း၊ ငြင်းပယ်ခြင်းပြုလုပ်နေခဲ့သည်မှာ ကာလရှည်ကြာခဲ့ပေပြီ။
၄။ ၁၉၈၈တွင် အာဏာထပ်သိမ်းခဲ့သော ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမောင်က တိုင်းရင်းသားလူမျိုး(၁၄၄)မျိုးစာရင်းမှ အစ္စလာမ်ဘာသာကိုးကွယ်သော မြန်မာမွတ်စလင်(ပသီ)၊ ရိုဟင်ဂျာ၊ ပသျှူး(မလေး)၊ မြေဒူးတို့အပါအဝင် တိုင်းရင်းသားအချို့ကို မိမိသဘောနှင့် ဖယ်ထုတ်ချန်လှပ်ထားပြီး တိုင်းရင်းသား(၁၃၅)မျိုးဟု မာရှယ်လောနှင့် ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့သည်။ မူလဘူတ တိုင်းရင်းသားများ၏ ပိုင်ခွင့်ကို ပယ်ဖျက်နိုင်သော အခွင့်အာဏာသည် စစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရ မဆိုထားဘိ၊ မည်သည့်ဒီမိုကရေစီ အစိုးရမျိုးတွင်ပင် မရှိပါ။ ဥပဒေမဲ့ ပြုကျင့်မှုဖြစ်၏။
၅။ ပြည်သူကရွေးချယ်ထားသော ပြည်သူ့ကိုယ်စားလည် လွှတ်တော်များကို ဘေးချိတ်ပြီး အစိုးရလုပ်သူက မိမိစိတ်ကြိုက် တိုင်းရင်းသားလူမျိုး (၁၀၁)မျိုးဟု ထပ်မံပြင်ဆင် သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းမှာလည်း အလျဉ်းမသင့်လျှော်ရုံမက ဒီမိုကရေစီကို ဆောင်ကျဉ်းနေသော ခေတ်ကာလတွင် အစိုးရလုပ်သူ လူတစ်စုတွင် မရှိသင့်တော့သော အာဏာဟောင်းကို ဆက်လက်ဆွဲကိုင်ပြီး မရိုးမသား ကျင့်သုံးနေခြင်းဖြစ်သဖြင့် တရားမဝင်ပါ။ ထို့ကြောင့် တိုင်းရင်းသား ဖြစ်ခြင်းနှင့် မဖြစ်ခြင်းကို နိုင်ငံတော်ကောင်စီက သတ်မှတ်နိုင်သည်ဟူသော စစ်အာဏာရှင် ဥပဒေဟောင်းကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်များက အမြန်ဆုံး ပယ်ဖျက်ပေးပါရန်ကိုလည်း အလေးအနက်ထား တောင်းဆိုသည်။
၆။ ထိုမျှမက ဇိုမီးလူမျိုးကို တိုင်းရင်းသား(၁၀၁)မျိုးတွင် မပါ၍ လက်မခံဟုဆိုပြီးနောက် ဇိုမီးကို တိုင်းရင်းသားလူမျိုးအဖြစ် သတ်မှတ်လိုက်ရပြီးနောက်တွင်လည်း တိုင်းရင်းသား(၁၀၂)မျိုး ဖြစ်လာရမည့်အစား (၁၀၁)မျိုးဟုသာ ဆက်လက်ပြောဆိုနေသဖြင့်လည်းကောင်း၊ တိုင်းရင်းသား(၁၀၁)မျိုးကို နိုင်ငံတော်အစိုးရက လွှတ်တော်များကို တင်ပြခြင်းမပြုဘဲ မိမိသဘောအလျှောက် ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်နေခြင်းကိုလည်းကောင်း၊ တိုင်းရင်းသား(၁၀၁)မျိုးသည် မည်သူများဖြစ်ကြောင်း လွှတ်တော်များအပါအဝင် ပြည်သူလူထုက မသိရှိရသေးခြင်းကြောင့်လည်းကောင်း လက်ရှိအစိုးရသည် မိမိလုပ်ပိုင်ခွင့်ဘောင်ကိုကျော်၍ လုပ်ဆောင်နေကြောင်း ထင်ရှားသည်။
၇။ ကျွန်ုပ်တို့သည် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ၊ ဘာသာပေါင်းစုံ ပြည်သူလူထု၏ အကျိုးစီးပွါးသည် အစ္စလာမ်သာသာဝင် မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ၏ အကျိုးစီးပွါးဖြစ်ပြီး၊ အစ္စလာမ်ဘာသာဝင် မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ၏ အကျိုးစီးပွါးသည် တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ၊ ဘာသာပေါင်းစုံ ပြည်သူလူထု၏ အကျိုးစီးပွါးနှင့် ထပ်တူဖြစ်သည်ဟု သမိုင်းစဉ်ဆက် အစဉ်တစိုက် ယုံကြည်သူများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် အချုပ်အခြာအာဏာ တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး၊ ပြည်ထောင်စု မပြိုကွဲရေး၊ တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေး၊ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ၊ ဘာသာပေါင်းစုံ ချစ်ကြည်ရေး၊ လူ့အခွင့်အရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေး၊ တန်းတူညီမျှရေး၊ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတို့ကို လိုလားသူများလည်းဖြစ်ကြ၏။
၈။ ထို့ကြောင့် တိုင်းရင်းသားဖြစ်ခြင်း၏ အနက်အဓိပ္ပါယ်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဖွင့်ဆိုရေး၊ တိုင်းရင်းသားများ အမည်စာရင်းကို တရားဝင် တိတိကျကျ သတ်မှတ်ရေး၊ တိုင်းရင်းသားများ၏ ရပိုင်ခွင့်နှင့် တာဝန်များကို သတ်သတ်မှတ်မှတ် ပြဌာန်းရေးနှင့် မြန်မာမွတ်စလင်(ပသီ)၊ ရိုဟင်ဂျာ၊ ပသျှူး(မလေး)၊ မြေဒူး၊ ရှမ်းနီအပါအဝင် တိုင်းရင်းသားများတို့၏ မူလအခွင့်အရေးများ ပြန်လည်ရရှိရေးတို့အတွက် သမိုင်းပညာရှင်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ လူထုလူတန်းစားအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားလည်များပါဝင်သော ကွန်ဖရင့်ကြီးကို နိုင်ငံတော်အစိုးရက တာဝန်ခံ၍ ၂၀၁၅ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီ ကျင်းပပြုလုပ်ပေးပါရန် လေးနက်စွာ တောင်းဆိုသည်။
ဧပြီလ (၁၃) ၂၀၁၃
ဒေါ်မော်လီ +1 416 516 7383 Canada law4women@gmail.com; ကိုကျော်စွာ +44 782 842 6801(UK) kyawzwa@b-m-a.org; Ma Yasmin +1 408 250 6227(USA) yasnohana@sbcglobal.net; ကိုကျော်ဝင်း +44-740-345-2378(UK) kyawwin78@gmail.com
Tahniah NAJIB-BN-UMNO kerana telah mengharumkan & menaikkan nama negara MALAYSIA di persada antarabangsa sbg Juara Dunia Dalam RASUAH !!!!